कपिलवस्तुमा सुत्केरी भत्ता गायब ! – Durbin Nepal News
कपिलवस्तुमा सुत्केरी भत्ता गायब !
दूरबिन नेपाल १० माघ २०७५, बिहीबार १४:३९
जितपुर । कपिलवस्तु वाणगङ्गा पिपरास्थित सरकारी अस्पतालबाट सुत्केरी भएका महिलाले साउनदेखि सुत्केरी भत्ता पाएका छैनन् ।
तर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका संयोजक कमल ज्ञवालीले सुत्केरी भत्ता समयमै निकासा भएर अस्पतालमै गएको दाबी गर्नुभएको छ । सुत्केरी भत्ता भनेर स्थानीय सरकारले ९स्थानीय तहले० रु एक हजार र गर्भवती भएको चार पटकसम्म स्वास्थ्य संस्थामै जाँच गराएबापतको रु ८०० यातायात खर्चसहित रु एक हजार ८०० पाउने प्रावधान रहेको छ । सेवाग्राहीले वाणगङ्गा नगरपालिकाले उक्त सेवा सुविधा नदिएको बुझेका छन् । तर नगरका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक ज्ञवालीले समयमै निकासा भएको बताएपछि सो रकम कहाँ गयो रु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
गत वर्ष २०७४÷२०७५ मा २३० जना महिलाले यहाँबाट उक्त सुविधा लिएका थिए भने विसं २०६९ मा स्थापना भएको अस्पतालले सुत्केरी सुविधा दिँदै आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा प्रत्येक महीना कम्तीमा ४०–५० महिला स्वास्थ्य उपचार गराउन आउने गरेका छन् ।
१० माघ २०७५, बिहीबार १४:३९ मा प्रकाशित